नेचर हब्र्सका राई फरार : कारबाहीबाट बच्न शेयर बिक्रीको प्रचार – TibraKhabar (तीव्रखबर डटकम) छिटो खबरको एउटै विकल्प
नेचर हब्र्सका राई फरार : कारबाहीबाट बच्न शेयर बिक्रीको प्रचार
- January 8, 2022 मा प्रकाशित
काठमाडौं । जालझेल गरी सरकारी कर्मचारीलाई कमिशनको लोभ देखाउदै अबैधरुपमा धन्दा गर्दै आएको नेटवर्किङ व्यवसाय गर्नेमध्ये केही सञ्चालकहरु अहिले अर्धभुमीगतका रुपमा बसेका छन् । प्रतिबन्धित पिरामिट शैलीमा नेटवर्किङको धन्दा चलाउदै उपभोक्तामाथी ठगी गर्दै आएका नेटवर्किङ कम्पनी मध्ये नेचर हब्र्स इन्टरनेशनल प्राली नामक कम्पनीको सञ्चालक भने अहिले भ्रामक प्रचार गरी कारबाहीबाट बच्नकैलागि लुक्दै आएको आरोप लागेको छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हिन संरक्षणमा नेटवर्किङको नाममा हुदै आएको ठगीको उजुरी परेपछि बाध्य भएर विभागले गत महिना चार नेटवर्किङ कम्पनिमा छापा मारेर कागजात जफत गरेको थियो । जफत भएका कागजातबाट ती कम्पनीले बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा ठगी गरेको ठहर भएपछि अहिले केही सञ्चालकहरुले भने आफुहरु सो कम्पनीमा नभएको भन्दै भ्रामक प्रचार गरेर लुक्दै आएको समेत पाइएको छ ।
विभागले ललितपुरमा रहेको नेचर हब्र्स इन्टरनेश्नल प्राली, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्राली, काठमाडौंमा रहेको हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राली र ग्लोबल ओरियन्स प्रालीमा छापा मारेको थियो । उनीहरुबाट स्वदेशीका नाममा विदेशी सामानलाई आफुखुशी उच्च मुल्य निर्धारण गरी बिक्री गर्दै ठगी गरेको उजुरी विभागमा परेको थियो ।
उनीहरुले प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा अनुमति लिँदा खुलाएको विवरण भन्दा फरक सामग्री बिक्री गरेको पाइएको छ । यी कम्पनिहरुले विगतमा नै सर्वसाधरण्लाई ठगी गर्दै आएका थिए । विभागले २०७७ असार १६ गतेदेखि अनुमति दिएपछि यी कम्पनीहरुले खुलेआम ठगीधन्दा शुरु गरेका थिए ।
तत्कालिन विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले यी कम्पनिहरुलाई स्विकृति दिएका थिए । हर्बो, युनीटी लगायत नेटवर्किङ कम्पनिमा आबद्ध भएकाहरुलेनै नाम परिवर्तन गरेर नयाँ कम्पनि खडा गरी सो अबैधधन्दा गर्दै आएको समेत अरोप उनीहरुमाथी लागेको छ । बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा नेटवर्किङ व्यावसाय गरिरहेको खुलेपछि नेचर हब्र्सको नाममा ठगी गर्दै आएका अनन्त भनिने गीतेन्द्र बाबु राईले नक्कली कागजात बनाई शेयर नामसारी गरि सो कम्पनीमा नभएको भन्दै भाग्दै आएका छन् ।
उनी अध्यक्ष रहेको नेचर हब्र्सबारे विभागले छानबिन गर्दा उनको नाममा रहेको ९० हजार कित्ता शेयर कुमार रम्तेललाई दिएको भन्दै भ्रामक विवरण पेश गरेको समेत पाइएको छ । राई र रम्तेल दुबै नेटवर्किङ व्यावसायको आवरणमा ठगी गरेपछि कारबाहीमा परेको हर्बो ईन्टरनेश्नलसँग जोडिएका व्यक्ति हुन् ।
उनीहरुले हर्बोकै शैलीमा नेचर हब इन्टरनेश्नल मार्फत ठगी गर्दै आएका व्यक्ती हुन । विभाग स्रोतले समेत राई अहिले विभागको सम्पर्कमा नआएको बताएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले २०७७ असार १७ गते उनीहरुलाई अनुमति दिएको थियो । बस्तुको प्रत्यक्ष विक्रीको अनुमति पाएपनि नेटवर्किङ व्यावसाय गरेको विभागको ठहर छ । नेचर हबको १० हजार कित्ता शेयरका मालिक पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीले रामबहादुर खनाललाई बिक्री गरेको देखाइएको छ ।
डिआइजी जोशी तत्कालिन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख हुँदा नै हर्बोको नाममा ठगीधन्दा मौलाएको थियो । उनले कारबाही गर्नुको सट्टा बार्गेनिङ गरेर शेयर हत्याएको आरोप समेत जोशीमाथी लागेको छ । नेचर हब्र्सले पिरामिड शैलीको ठगी धन्दा चलाएको भन्दै विभागले गत साउनमै स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।
उच्च राजनीतिक पहुँचका कारण नेचर हब्र्समाथिको छानबिन नै नगरि उन्मुक्ति समेत दिदै आएको छ । अबैधरुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तीको स्रोत देखाउन नसक्ने भएपछि मिडियामा लगानी गरेर अध्यक्ष समेत रहेका राई अहिले सम्र्पक विहिन भएर बसेका छन् । निकै तामझाम सहित सञ्चालनमा आएको ग्यालेक्सी फोर के नामक टेलिभिजनका मालिक तथा अध्यक्ष समेत रहेका गितेन्द्र बाबु राई ठगीमा मुछिएपनि सो टेलिभिजनले भने अहिले सम्म कुनै प्रतिकृया दिन सकेको छैन ।
उनीद्वारा सञ्चालित नेटवर्किङ कम्पनि नेचर हब्र्सले ठगी गरेको खुलेपछि विभागले छापा मारेको थियो । यसैबीच उनी अध्यक्ष रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी फोर के नामक टेलिभजनमा स्रोत नखुलेको पैसा लगानी भएको समेत आशंका गरिएको छ ।
राईले नेटवर्किङ व्यावासायको आवरणमा जम्मा गरेको कालोधन अबैध माध्यमबाट संकलन गरेको रकम टेलिभिजनमा लगानी गरेको उच्च स्रोतको दाबी रहेको छ । राईले नेपाल बाहिर मलेशिया, सिंगापुर, कतार, भारत हङकङसहित ८ वटा मुलुकमा अवैध रुपमा नेटवर्किङ व्यावसाय चलाउँदै आएका व्यक्ती हुन ।
र यो पनि हेर्नु भयो ?
नयाँ नेटवर्किङ धन्दाको पर्दाफास : बाढ्यो विलासी जीवन विताउनेदेखि आकाशमा उड्ने सपना
नेटवर्किङको अबैधधन्दा सञ्चालकलाई मन्त्री भट्टले नै साथ दिएपछि…(भिडियो. सहित)
अबैध नेटवर्किङ धन्दामा यि सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारीकै लगानी,सरकार मौन (भिडियो सहित)
भर्चुअल मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) को धन्दा फेरि सुरु : नेटवर्किङ बिजनेसमा यि व्यक्तीको संलग्नता (भिडियो सहित)
नेटवर्किङ व्यवसायीको नाममा हुण्डीको कारोबार, उजुरी नपरेकाले केही गर्न नमिल्ने भन्दै पन्छियो विभाग (भिडियो सहित)
नेटवर्किङ व्यवसायमा सरकारी ऐन विपरित सञ्चालन:यि कम्पनीले गर्छन अबैधधन्दा, सरकार मुकदर्शक
नेटवर्किङको अबैधधन्दाको रकमबाट टेलिभिजनमा लगानीः मिडियाको कार्ड देखाउदै ठगीधन्दा गरिदै
नेटवर्किङ व्यावसायका नाममा ठगी : स्रोत नखुलेको रकम मिडियामा लगानी
नेटवर्किङ कम्पनीले नेपालीसंग पैसा ठग्दै, विदेश पठाउँदै
केन्द्रको निर्णय कुर्दै कर्णालीका सत्तागठबन्धन दल